एक सफल B2B सामग्री मार्केटिंग रणनीति को आधिकारिक आवश्यकता | Martech Zone
एक सफल B2B सामग्री मार्केटिंग रणनीति को प्राधिकरण आवाश्यक छ
शुक्रवार, अक्टुबर 9, 2015 शुक्रवार, अक्टुबर 9, 2015 Douglas Karr
मार्केटरहरू प्राय: आफ्ना सामग्री र ईमेल मार्केटिंग कार्यक्रमहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न संघर्ष गर्दैछन्। प्राय: जसो होइन, हाम्रा ग्राहकहरूको रणनीतिहरू उनीहरूको आन्तरिक प्रक्रियाहरू वरिपरि निर्मित छन्। समाचार, उत्पादन रिलिजहरू, सेवा अपडेटहरू वा साप्ताहिक तालिकामा मात्र प्रकाशित गरिएको सामग्रीको हुकुम दिन्छ।
समस्या, अवश्य पनि, यो हो कि तपाईंको व्यवसाय 'मार्केटिंग योजनाले तपाईंको सम्भावनाहरूको दिनचर्या अनुसरण गर्दैन'। एक सम्भावित व्यवसाय जानकारी को खोजी हुन सक्छ जुन तपाइँले बर्षको हरेक दिन प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, वा सायद मौसम द्वारा, वा बजेट चक्र द्वारा। समय लीड पोषण र मार्केटिंग स्वचालन प्रणाली को एक प्रतिबद्धता हो - सामग्री प्रदान गर्ने जुन व्यापारलाई तान्ने वा धक्कामा आधारित रूपान्तरणमा आधारित छ उनीहरुको तालिका।
तर स्वचालन अझै पनि कमीकमजोरी बिना छैन। धेरै कम्पनीहरूले विश्लेषण र समग्र ग्राहक डेटा अनुकूलनको साथ आउन जीवन चक्र। वास्तविकता हो, प्रत्येक व्यवसाय तिनीहरूको तालिकामा काम गर्दछ - धेरै कडा र धेरै चाँडो धक्का र तपाईं संभावना गुमाउनुभएको छ। धेरै बिस्तारै तान्नुहोस् र तपाईंको प्रतिस्पर्धीले बिक्री पाउन सक्दछ।
सामग्री विकासको लागि धेरै आयामहरू छन्। छैन भन्दा अक्सर, व्यवसाय उत्पादकता मा काम। एक उदाहरण एक दैनिक ब्लग पोष्ट, साप्ताहिक न्यूजलेटर, एक मासिक इन्फोग्राफिक र एक त्रैमासिक ह्वाइटपेपर उत्पादन गर्न सक्छ। तर उत्पादकताले व्यवसाय पाउँदैन जहाँ यसको उपस्थित हुन आवश्यक छ। जब सम्भावितिले खोजी गर्दै छ भने उपस्थितिसँग सही सामग्री छ।
त्यसोभए, व्यवसायहरूले सफल सामग्री क्यालेन्डर, आन्तरिक प्रक्रियाहरू, र पदोन्नति तालिका र जनसंपर्क अभियानहरू सफलता सुनिश्चित गर्न को लागी विकसित गर्दछ। नयाँ स्वचालन टेक्नोलोजीहरूले मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजीको प्रयोग सम्भावित संचारलाई अनुकूलन गर्न र ग्राहकमा निर्भर गतिमा रूपान्तरणको लागि उनीहरू समक्ष पुर्‍याउन प्रयोग गरिरहेका छन्।
यो अझै पर्याप्त छैन।
समस्या, अवश्य पनि, कुनै पनि सक्षम प्रतिस्पर्धीले उही कोणमा काम गरिरहेको छ र सायद समान टेक्नोलोजीहरू कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ। यो अन्तहीन, दोहोरिएको चक्रमा सामग्री उत्पादन गर्न जारी गर्न पर्याप्त छैन। एक मार्केटिंग सम्भावितबाट एक योग्य नेतृत्वमा व्यापार नेतृत्व लाई अधिकारको आवश्यक छ। र एक योग्य बिक्री बिक्री को लागी भरोसा आवश्यक छ।
जब व्यवसायहरू समाधान खोज्दैछन्, तिनीहरूले यसलाई एक बाट खोज्छन् अख्तियार। व्यवसायहरू जोखिम न्यूनीकरण गर्न चाहन्छन्, त्यसैले तिनीहरू विक्रेताहरूबाट खरीद गर्न चाहन्छन् र उद्योग अधिकारका साथ समाधानहरू।
प्राधिकरणले प्राय: बेवास्ता गरिन्छ यो सफल सामग्री मार्केटि strate रणनीतिहरूको एक कुञ्जी भएता पनि। यो चिह्नित गर्नुहोस्!
केही कम्पनीहरूले प्रभावकारीहरूको सहायता लिन्छन् जुन पहिले नै दिइएको उद्योगमा उनीहरूको आफ्नै प्रगति गर्न अधिकार छ। हामीले यस रणनीतिको साथ मिश्रित परिणामहरू देख्यौं प्रभाव अक्सर छ वास्तव लोकप्रियता अनलाइन।
अधिकार प्राप्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावी तरिका यसको लागि भुक्तानी गरेर होईन; यो तपाईंको आफ्नै निर्माण गर्न हो। यो चिह्नित गर्नुहोस्!
सामग्रीबाट अख्तियार निर्माण नयाँ सामग्री विकास बारे छैन। यो तपाईंसँग पहिले नै भएको सामग्रीको प्रत्येक अंशको लेखा परीक्षण र यसलाई अनुकूलित गर्ने बारेमा हो। यो बाहिरी सामग्री हटाउने बारे हो जुन कुनै जीवन चलाउँदैन वा कुनै सम्भावनालाई जीवन चक्रबाट तल सार्दै छ।
अधिकारको गेजको रूपमा Google भन्दा राम्रो प्रणाली छैन। गुगलको एल्गोरिदमहरू हालका बर्षहरूमा विकसित भएको छ मानिसहरू र व्यवसायहरू, स्थानहरू, उत्पाद नाम, र संगठनहरू भित्रका मानिसहरू बीचको सान्दर्भिकता र सम्बन्धहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न। यदि तपाइँ तपाइँको कम्पनी एक अधिकारी हो वा हैन भनेर सोच्नुहुन्छ भने, तपाइँले खोजी गर्नुपर्नेछ जहाँ तपाइँ सम्भावित विषयहरुका लागि क्रमबद्ध गर्नुहुन्छ जहाँ सम्भावितहरू अनलाइन खोजी गरिरहेका छन्।
खोजी ईन्जिन नतीजाहरूमा राम्ररी दर्जा दिन तपाईंले अविश्वसनीय सामग्री सिर्जना गर्नुपर्दछ। दिइएको कुञ्जी शब्द संयोजनका लागि, यसको लागि तपाईंलाई अध्ययन आवश्यक पर्दछ जुन खोजीलाई जित्दै छ र अधिक विस्तृत कार्य गर्दछ। हामी ती विषयहरू पहिचान गर्छौं जुन प्रतियोगीहरू हामी भन्दा राम्रो क्रममा छन्, हामी टेक्स्ट, ग्राफिक्स र भिडियो को उपयोग गरेर अझ राम्रो सामग्री विकास गर्छौं ... र हामी सामग्री अपडेट गर्छौं जुन हाम्रो पहिल्यै छ जुन राम्रो छैन।
हाम्रो प्रयासहरू १००% नयाँ सामग्री उत्पादनबाट लगभग करीव सारिएको छ %०% नयाँ र हालको सामग्रीको %०% अनुकूलन। हाम्रो सामग्री रणनीतिहरू सँधै नयाँ लेखहरू, इन्फोग्राफिक्स, र भिडियो उत्पादन गर्नबाट हट्यो। हामी अब हाम्रो वर्तमान सामग्री अप्टिमाइज गर्दछौं, नयाँ (समान URL मा) को रूपमा पुन: प्रकाशित गर्नुहोस् र यसलाई सामाजिक रूपमा प्रमोट गर्नुहोस्। हामी यसको भुक्तानी रणनीतिहरू सम्मिलित गर्दछौं।
किनभने यो छ को सबै भन्दा राम्रो सामग्री, यो राम्रो श्रेणीका हुनेछ। परिणाम छक्कलाग्दो छन्। हामीले काम गरेका सयौं कीवर्ड शीर्षकहरूमा, हामी ११ को औसत श्रेणीबाट 11..को औसत श्रेणीमा सरेका छौं। हाम्रो रूपान्तरण नेतृत्व अधिग्रहणको लागि २ 3०% भन्दा माथि छ। र हाम्रो नेतृत्व प्रति हाम्रो लागत ड्रप हुँदैछ जबकि हाम्रो नेतृत्वको गुणस्तर सुधार हुँदैछ।
यसमा अन्तिम नोट। प्राधिकरण व्यवसाय संस्था भन्दा सजिलो मानिसहरुमा आउँदछ, त्यसैले तपाईले आफ्ना नेताहरूलाई बाहिर राख्नु पर्छ। एप्पल एक विशाल ब्रान्ड हो, तर व्यापारको अधिकार स्टीभ जॉब्स, जोनाथन आइभ्स, टिम कुक, स्टीव वोज्नियाक, गाय कावासाकी, आदि जस्ता नामहरू बिना छैन।
तपाईंको व्यक्तिलाई अधिकार आंकडा हुने अवसर प्रदान गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो व्यवसायको अधिकारलाई गति दिन सक्नुहुन्छ। आफ्ना नेताहरूले कार्यक्रम र सम्मेलनहरूमा बोलेको देखेर तपाईंको व्यवसायलाई दर्शकहरूको अगाडि राख्दछ जुन दुवै प्रासंगिक र समयमै हो। व्यक्ति-सम्बन्धले बिक्री बन्द गर्न आवश्यक समय घटाउनेछ किनकि तपाईं आफ्नो अधिकार प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ र एकैसाथ सम्भाव्यताको विश्वास पनि लिन सक्नुहुनेछ।
टैग: अख्तियारb2bb2b प्राधिकरणB2B रूपान्तरणसामग्री प्राधिकरणकेटा कावासाकीJonathon IVESस्टीव कार्यहरूस्टीव Wozniakटिम कुक
मोबाइल अनुप्रयोगहरू: योजना, प्रोटोटाइप, र परीक्षण कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?